Maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo xilkii la wareegay, kuna ballan qaaday is-badel maamul. – Radio Daljir
Maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo xilkii la wareegay, kuna ballan qaaday is-badel maamul.
Muqdisho, Nov 11 – Waxaa maanta si rasmi ah xilkii ula wareegay maamulka cusub ee gobolka Banaadir kaas oo uu dhawaan magacaabay m/weynaha dawladda federaalka ah Shariif Sh Axmed.
Munaasabaddaan oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa xilalkii kula kala wareegay maamulka cusub ee gobolka Banaadir ee uu guddoomiyaha ka yahay Eng. C/risaaq Max?ed Nuur ?Nuune? kaas oo ah isla duqa Muqdisho, iyo maamulkii hore ee uu guddoomiyaha u ahaa Max?ed Cismaan Cali ?Dhagaxtuur?.
Xafladda oo ahayd mid aad u ballaaran, ka sokow mas?uuliyiinta xilalka la kala wareegayey, waxaa goob joog ka ahaa madax ka tirsan dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen, kuxigeenka R/wasaaraha ahna wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Prof. C/raxmaan X Aadan ?Ibbi?, wasiirka arrimaha gudaha C/qaadir Sh Cali Cumar, Eng. C/raxmaan Yariisow, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas?uuliyiin kaleeto oo ka kala socotay ururrada bulshada rayidka ah.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Muqdisho Max?ed Cismaan Cali ?Dhagaxtuur, oo lagu furay munaasabadda xil wareejinta ayaa sheegay in uu si aad ah ugu faraxsan yahay xilka uu maanta wareejinayo, wuxuuna tilmaamay in ay tahay tallaabo ku dayasho mudan, siduu sheegayna loo baahan yahay cidkasta in ay si sharafleh u wareejiyo xilkii loo dhiibay haddii cid kale loo magacaabo.
Dhanka kale guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eng. C/risaaq Max?ed Nuur ?Nuune?, oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyey maamulkii hore ee gobolka Banaadir isagoo uga mahadceliyey sida dimuqraadiyadda ah ee ay xilka u wareejyeen.
Eng Nuune, wuxuu ballan qaaday in uu wax badan ka badli doono hannaankii maamul ee goboka Banaadir, isagoo sheegay dhammaan degmooyinka gobolkaasi in ay gacantiisa soo gali doonaan muddo kooban si aan dhiig ku daadan, wuxuuna intaasi ku daray in ay jiri doonaan wada hadallo ay la furi doonaan maamul ahaan mucaaradka dawladda oo ka taliya degmooyinka badan oo ka tirsan gobolka Banaadir.
Wasiirrada dawladda ee ka soo qaybgalay xafladda xil wareejinta, ayaa dhammaantood sheegay ahmiyadda iyo baahida dhalisay magaacbidd maamulka cusub, taas oo ay ku sheegeen in ay tahay sidii tallaabo hormareed oo wax ku ool ah loo qaadi lahaa iyadoo la suurto galinayo maamul karti iyo awood u leh hawlaha looga fadhiyo.
Maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo ah maamulka dhawaan uu magacaabay m/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed, hannaan maamul oo ka gadmi kara dadka reer Muqdisho oo muddo badan la soo daalaa dhacayey dhibaatooyin ammaan xumo.